Uluntu lwase Khayelitsha luhlomle kumba wokuhluzwa kwendaba liziko lezosasazo iSABC – Elitsha
11th August 2016 Kholiswa TyikiEdition 8 0 Xhosa
U Karabo Rajuili exoxa no Andile Lili we Seskhona Peoples Movement. Photo: Sindile Gulw
Loka Lili ukuthetha oku kwindibano ibihlalutya umgaqo nkqubo ophakanyiswe ngumlawuli oyintloko weziko losasazo lalapha e Mzantsi Afrika (SABC) u Hlaudi Motsoeneng , nokubeke kwacaca ukuba phantsi kolwakhe ulawulo akukho nanye intantheli okanye inkqubo ezakuveza imiboniso enoqhanqalazo olundlongo- ndlongo,okanye elubonakala ngathi linyevulela oko akubiza ngomsebenzi omhle owenziwa ngumbutho olawulayo iANC.
Uqhanqalazo ebelukhokelwe yi R2k ne SOS lujoliswe e SABC. Photo: R2K
Eliqonga belibanjelwe kwiziko loluntu Isivivana Centre, beliququzelelwa ngomnye wemimbutho olwela amalungelo nokubuyiselwa kwesidima sabahlali baseKhayelitsha iSocial Justice Coalition (SJC) nange nkxaso yezinye inkongolo ezilwela ukungabikho kwemfihlo kurhulumente nakuluntu uRight 2 Know, intatheli zamaziko okusasaza asekuhlaleni amtshantliziyo okuhlala ngengcuntswana labahlali.
Amalungu okuhlala akhwele ezehlela kulo kaLili ngokunganyaniseki kumzabalazo wokulwela isidima sabantu, bemtyhola ngokuba yingcuka eyombethe ufele lwegusha kumzabalazo wokulwela amalungelo abantu, bekholelwa ukuba bekunjalo ebengasoze avume kunyhashwe ilungelo lokusebenza ngokukhululeka kwentatheli njengoko kusenzeka kwi SABC.
Phantsi kolawulo luka lokaMotsoeneng nobamele nozitshutshumbisayo intatheli zelaziko ekwazi grogrisa ngokuzithathela amanyathelo angqingqwa ezo kucaca ukuba zidelela umthetho ngokuthetha esidlangalaleni ngalempatho yakhe njengo Lukhanyo Calata notyityimbiselwa umnwe ngesigqibo sakhe sokuqhaqhalaza ngesigqibo esithathwa ngu loka Motsoeneng, Loka Calata uthi oku kunyevulela impalalo gazi lamatsha ntliziyo afana noyise u Fort Calata nowayelwa norhulumente wobandlululo.
Abaninzi abaquka uKarabo Rajuili we Right 2 Know bayibone lenxaso kaLili kulomapasho njengendlela yokuvusa izithunzela zorhulumemnte wengcinezelo nalapho intatheli babenganikwa amathuba okuveza ukucinezeleka kwabantu ngu rhulumente, kwayengokokutsho kwalokaRaujili oku ayililo ihlolobo lokuziphatha lorhulumente wentando yesininzi.
Ngaphezulu kwako onke okuphalaziweyo kulendibano okucacayo kukuba urhulumenete nabo basemagunyeni bazakuqinisekisa ukuba benza nantoni na esemandleni abo esemandleni abo ukuqiniseka ukuba abantu bahlala bezinkukhu ezisulwe umlomo ngamalungelo abo. Kwaye bayakuhlala bengazi kuba kukho abobangamajoni avalela inyani enokukhulula abantu kumakhamandela obuqhophololo kunoba banikwe ulwazi olinoku qinisekisa ukuba uluntu lufumana urhulumente olwela izidima zoluntu, hayi izisu zabambalwa abaselulawulweni ucinezele ngelitshoyo ophetheyo uyibona Amkelwa Mapatwana weSocial Justice Coalition.
Also read: Sigxekwa ngokuhamba kancinci iSixeko seKapa ukunceda abo bangamaxhoba emvula ezina ngamandla